Global Voices teny Malagasy » Tondradrano Any Serbia : Noraisin’ny Serba An-tànana Ny Famonjena Ireo Tra-Boina An’Aliny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Mey 2014 22:36 GMT 1	 · Mpanoratra Danica Radisic Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Serbia, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Voina, Vonjy Voina
Ny fiakaran'ny renirano any Sremska Mitrovica, Serbia, tamin'ny 17 May 2014. Sary avy amin'i Stanko Pužić. Nahazoana alàlana.
Loza voajanahary izay tsy mbola nisy ohatra azy tao anatin'ny 120 taona no nolazain'ny manampahefana fa nihatra amin'i Serbia sy Bosnia ny volana May 2014, rehefa nisy rahona natevina nànana tsindry ambany teny ambonin'ny faritra ary nandatsaka, tao anatin'ny telo andro monja ny orana tokony ho latsaka mandritra ny telo volana .
Tanàna maro, Serba sy Bosniana, no difotra metatra maromaro tany ambanin'ny rano ka nafindra toerana ny mponina, fara-faha keliny zato no maty ary an'aliny no tsy manan-kialofana sy nafindra toerana. Nampangaina ho manao antsirambina ny ezaka famonjena voina ny fitondrana any Serbia, raha toa ka voarindra amin'ny fomba mahavariana kosa ny hetsika notarihin'ireo olon-tsotra.
Efa tamin'ny tapaky ny volana aprily 2014 ny fanairana voalohany ny amin'ny tondradrano ho an'i Serbia sy Bosnia-Herzegovina, nahitana fiakarana kely tsy mahazatra ny faritra amin'ny vanim-potoana tahaka izao ny rano tato aoriana kely.
Nisy rahona manify nandrakotra ny faritra nandritra ny herinandron'ny 12 May ary dia nilatsaka tsy nijanona nandritra ny ando maromaro ny orana. Nanomboka ny 15 May no voalaza voalohany fa nisy maty sy olona 500 nalàna tamin'ny tranony. Mbola nirotsaka tsy nijanona ihany ny orana ny andro manaraka ary dia niakatra ireo renirano maro mamakivaky ireo firenena roa ireo.
Tanàn-dehibe dimy, ao anatin'izany i Belgrade renivohitra, miampy tanàna 16 no nilaza fa trà-doza latsaka anaty hamehana tamin'ny 15 May, raha toa ka ny faritra andrefana sy afovoan'i Serbia no tena voa mafy. Vetivety foana dia tonga ny famonjena voina nataon'ny tafika, haingana sady nahomby ny fanavotana tamin'ny alàlan'ny famindràna toerana ireo tanàna maro. Namoizana ain'olona an-jatony tao Obrenovac, tanàna manakaiky an'i Belgrade sady havokavoka iray lehibe ho an'ny herinaratra ao amin'ny firenena, .
Fa na dia izany aza tsy mirindra tsara tahaka ny ataon'ireo tafika sy polisy ny ezaka vonjitaitra sy ny fanomezana trano ireo niharam-boina ataon'ny manampahefana.
Notsikerain'ny gazetin'ny vavahady Druga Strana (Lafiny Hafa), nivoaka tamin'ny Alahady 18 May, amin'ny lohateny hoe ” Ry fanjakana, tsy mila anareo intsony izahay” ny fikorontanana sy ny tsy fahazahoam-baovao avy amin'ny governemantan'ny Repoblikan'i Serbia nandritra io loza io. Vetivety dia niparitaka tamin'ny haino aman-jery sosialy io lahatsoratra io ary tonga hatrany amin'ny toerana maro samy hafa mihitsy aza. Indraindray tsy voasokatra io vohikala io, lazaina fa noho ny hamaroan'ireo mpitsidika io lahatsoratra manokana io ao amin'ilay vohikala.
Voafintina ao amin'io gazety io ny fahadisoam-panantenan'ny maro any Serbia manoloana ny tsy fisian'ny fandaminana hita maso ataon'ireo tompon'andraikitra ambonin'ny fanjakana nandritra ilay tondradrano nahatsiravina. Nanomboka tamin'ny fiderana ilay fandaminana nahitam-bokany nataon'ireo mponina sy ireo fiarahamonim-pirenena vaovao nandritra ilay loza voajanahary izany :
‘Ndeha hazavaina malaky izao manaraka izao : Deraina ny mponina eto amin'ity firenena ity. Raha tsy isika no isika dia efa nidaboka isika nandritra izay fotoana ela izay. Amin'ny fahitàna ny fifandaminana sy ny herin'ny firaisankina izay voatsangana tao anatin'ny fotoana tena fohy, dia tsy vita ny tsy hirehareha sy hahatsapa avy hatrany ny antony naharesentsika / mbola nahavelomantska tamin'ireny karazan-javatra maro be namakivaky ny tantara ireny.
Satria isika no isika, hatramin'ny fiafaran'ny andro, nifanampy tao anatin'izay zavatra faran'ny sarotra indrindra. Angamba heverintsika mateka fa efa ananantsika izany amin'ny fotoana mahazatra. Mihevitra isika fa irery, ary samy mikaroka ny ho an'ny tenany ny tsirairay, fa tsy tahaka izany izao hitantsika izao.
Amin'ny lafiny iray, maneho hakamoana, tsy fahavononana ary fikorontanana tanteraka ny Fanjakana. Iza no mila fanjakana tahàka izany ?
Tanisain'io lahatsoratra io ihany koa ny hadisoana nataon'ny mpitondra izay re matetika amin'izao fotoana izao eny an-dàlamben'i Serbia sy hita any amin'ireo tambajotra sosialy nandritra ilay safodrano. Isan'ireny ny tsikera atao amin'ny Filoha Tomislav Nikolić izay tsy niteny tamin'ny firenena afa-tsy indray mandeha ihany tao amin'ny haino aman-jery nandritra ireny fitsapàna ireny, raha toa ka voampanga ho nangeja ny gazety teo amin'ny firenena sy voatsikera ho nangataka fotoana betsaka tamin'ny onjampeo ary nanararaotra ny fahavoazana ho fotoana fangalàna sary sy hanaovana fanazavana politika ny Piraiministra Aleksandar Vučić sy ireo minisitra sasany.
Nandritra iany fotoana izany, nifanome tànana ireo olona mitovy hevitra ka nahaforona fiarahamonim-pirenena betsaka mba hifanampy amin'ny loza, manomboka amin'ny fanamafisana ny fefilohan'ny tanàna toy ny any Kostolac, izay toerana ihavian'ny 20%-n'ny herinaratra any Serbia, ka hatramin'ny fanamarinana ny vaovao sy ny fizarana izany amin'ny tambajotra sosialy ary ny vohikala toy ny Poplave.rs  (Tondradrano) sy ny Nestali.rs  (Tsy hita). Tanatin'ny 24 ora voalohany nametrahana ny vohikala ho an'ireo olona tsy hita dia niisa 270 ny filazana ireo olona tsy hita ary 11 efa hita.
Misy ekipanà mpanao gazety, mpitoraka bilaogy, IT ary matihanina amin'ny PR sy ny hafa ihany koa ao ambadik'ireo vohikala roa ireo, amin'ny fampirindràna ny fandefasana ny vaovao voamarina irery ihany sy ara-potoana ho an'ny vahoaka ary ny sarintanin'ny loza naterak'ilay tondradrano.
Isan'ireny bitsika maro mitsikera ny fitondrana sy midera ny ezaky ny olon-tsotra nandritra ny tondradrano ireny ity iray ity avy amin'i Dušan Ninković , mpitoraka bilaogy sady mpaka sary izay milaza ny fahatsapàn'ny rehetra nandritra ny andro maromaro :
‘Ndao hanolo-tena, taorian'ireny namonjentsika olona ireny, hanangana ny Corridor 11 [ làlana manivaka tena ilaina mampitohy an'i Bari, Bar, Belgrade ary Bucarest izay efa novinavinaina taona maro], ny làlambe migodanan'i Horgos-Pozega [ ampahan-dàlana avy any Hongria mamakivaky an'i Serbia izay voaloton'ny resaka kolikoly], ny lakandrano mankany Tesalonika [ lakandrano mampitohy an'i Belgrade amin'ny faritra avaratr'i Gresy, mampisalasala ireo manampahaizana ny fanaovana azy], ary ny tonelin'i Fruska Gora [ iray amin'ireo vinavinanà foto-drafitrasa tena goavana any avaratr'i Serbia ary hatomboka amin'ny 2015] ?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/05/27/60006/
 tao anatin'ny telo andro monja ny orana tokony ho latsaka mandritra ny telo volana: http://en.wikipedia.org/wiki/2014_Southeast_Europe_floods
 gazetin'ny vavahady Druga Strana : http://www.drugastrana.net/svakodnevica/drzavo-ne-bismo-te-vise-zadrzavali/
 iray ity : https://twitter.com/DusanNinkovic/status/468022833566982144